EDuke32: GNU / Linux မှာ Duke Nukem 3D ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ပြီးကစားနည်း။ | Linux မှ
ယနေ့၊ ဇွန်လ၏ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်သောငါတို့ပျော်စရာကောင်းသော၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနှင့်ကြီးထွားလာသည့်နောက်ထပ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကဂိမ်းတစ်ခုကိုယူဆောင်လာခဲ့သည် ဂိမ်းစာရင်း del အမျိုးအစား FPS (လူကိုယ်တိုင်သေနတ်သမား) ငါတို့ဘာကစားနိုင်လဲ GNU / Linux များ။ ဤရွေ့ကား, အဟောင်းနှင့်ကမ္ဘာလူသိများသည်ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမဖြစ် Duke Nukem 3D လက် "EDuke32".
"EDuke32" သူတို့ကိုယ်သူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောသူတို့သည်ဒါကြောင့်တစ် ဦး အလွဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ် ဂိမ်းကစား de la "ကျောင်းဟောင်း"နောက်တဖန်ဒီတော့အံ့သြစရာများနှင့်ဂန္ကစားနိုင်ပါတယ် GNU / Linux ရှိ FPS ဂိမ်း95/98 Bit ဂိမ်းများမှ Windows 16/32 ကိုအစားထိုးခြင်း။
ထိုချစ်သူများအဘို့ Linux ပေါ်မှဂိမ်းများနှင့်အထူးသဖြင့်အဘို့ FPS ဂိမ်းကစားသူများ de la "ကျောင်းဟောင်း"ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောနောက်ဆုံးရေးသားချက်များအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ချန်ထားမည် Doom နှင့်အခြားအလားတူဂိမ်းများကိုပိုမို:
"GZDoom သည် ZDoom မှပိုင်ဆိုင်သောလက်ရှိဆိပ်ကမ်း (၃) ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခေတ်မီ Operating Systems တွင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Doom Engine ၏တိုးတက်သောဆိပ်ကမ်းများမိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆိပ်ကမ်းများသည်ခေတ်မီ Windows, Linux နှင့် OS X တို့တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ မူလဆော့ဖ်ဝဲမှ Id ထုတ်ဝေသောဂိမ်းများတွင်မတွေ့ရသောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုထပ်ထည့်သည်။ အဟောင်း ZDoom ဆိပ်ကမ်းများကိုအခမဲ့ သုံး၍ အခမဲ့ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်မှအမြတ်မရနိုင်ပါ။ ဗားရှင်း ၃.၀.၀ အရ GZDoom နှင့်၎င်း၏သားစဉ်မြေးဆက်များသည် GPL အောက်တွင်လိုင်စင်ရပြီးလိုင်စင်အသစ်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။" ¿GZDoom ကို အသုံးပြု၍ Doom နှင့်အခြားအလားတူ FPS ဂိမ်းများကိုမည်သို့ကစားရမည်နည်း။
1 EDuke32: GNU / Linux အတွက် Duke Nukem 3D
1.1 EDuke32 ဆိုတာဘာလဲ။
1.3 ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်စခရင်ရိုက်ကူးခြင်း
EDuke32: GNU / Linux အတွက် Duke Nukem 3D
၎င်း၏အတွက်၎င်း၏ developer များအရသိရသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, "EDuke32" es:
"အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့် free home game engine နှင့် PC အတွက် Duke Nukem 3D (Duke3D) အမည်ရှိ PC အတွက်ဂန္ထဝင်ပထမ ဦး ဆုံးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းကိုလိုက်လျောညီထွေစွာပြုလုပ်နိုင်ပြီး Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD နှင့်အခြားအရာများစွာတို့တွင်သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ထောင်နှင့်ချီသောအသုံး ၀ င်သော၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများအပြင် homebrew developer များနှင့် mod ဖန်တီးသူများအတွက် scripting extension များထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်သည်။ EDuke32 သည်စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် open source software ကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်။"
များစွာသောအကြား အင်္ဂါရပ်များ, လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်သတင်း ဘာတွေပါလဲ "EDuke32"အောက်ပါ ၁၀ ခုကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
EDuke32 သည် GNU GPL လိုင်စင်နှင့် BUILD လိုင်စင်အောက်တွင်ရှိသည်။
မည်သည့် emulation အမျိုးအစားပေါ်မဆို မူတည်၍ သူအလုပ်လုပ်သည်။
၃၀၇၂ x ၂၃၄၄ ကဲ့သို့သောမြင့်မားသောဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲအရှိန်မြှင့်ထားတဲ့ OpenGL renderers နှစ်ခု (သို့) သင်နဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ဂန္ထဝင်အမှားဆော့ဖ်ဝဲ mode နှစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်။
၎င်းသည် DOS ကာလ၌အန္တရာယ်မရှိသော bug အမြောက်အများကိုဖြေရှင်းပေးသည်၊ သို့သော်ခေတ်သစ်ကာကွယ်ထားသောမော်ဒယ်လ်များနှင့်ဆိုးဝါးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် EDuke32 သည်မူရင်းထက်လျော့နည်းသည်။
၎င်းတွင် Plagman ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော“ Polymer” renderer ပါရှိသည်၊ ၎င်းသည် Ken Silverman ၏“ Polymost” ပြန်ဆိုခြင်းကိုအစားထိုးသည်။
၎င်းတွင်ဂိမ်း၏ scripting system အတွက်တိုးချဲ့မှုအသစ်များစွာရှိပြီးသင့်အားခေတ်မီဂိမ်းများကိုပင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ဂိမ်း mods များပြုလုပ်နိုင်သည်။
EDuke32 လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးအတွက်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် HRP ကိုအလုပ်လုပ်သည်။ အခြားမည်သည့် port ကမှ HRP ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်အားလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်
Quake-style key bindings, command aliases၊ Advanced tab ပြီးစီးခြင်း၊ command အပြည့်အစုံ၊ ရောင်စုံစာသားများနှင့်အခြားအရာများအပါအဝင် full-featured console တစ်ခုထည့်ပါ။
မှတ်ချက်ဖြေ - အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့သာရတယ်။
၎င်းကိုကူးယူရန်၊ သင်သည်အောက်ပါသို့သွားပါ link ကို လက်ရှိဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
နှင့်ဤသည်အခြားကနေ link ကိုဖိုင်အမည် -
၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ဖိုင်ကို unzip လုပ်ရန်သာလိုသည် «eduke32_src_20210629-9443-33e98f55a.tar.xz» ဖန်တီးထားတဲ့ unzipped ဖိုင်တွဲထဲမှာဖိုင်ကိုကူးယူပါ "Duke3d.grp"။ ထို့နောက် decompression ဖန်တီးထားသည့် folder အတွင်းမှအောက်ပါ command ကို အသုံးပြု၍ executable ကိုဖန်တီးရန် compile လုပ်ရမည်။
၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက် (execute) အတွက်အောင်မြင်သော compilation ဖြစ်လျှင်အောက်ပါ command ကိုသာလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောအသုံးပြုရန်အတွက် unzipped folder ကိုအမည်ပြောင်းရန်အကြံပြုသည် "Eduke32"။ မအောင်မြင်သောစုဆောင်းမှုသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်လျှင်အောက်ဖော်ပြပါအကြံပြုထားသော packet များကို install လုပ်ပါ။
မသန်စွမ်း ပိုပြီးတရားဝင်သတင်းအချက်အလက် ၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုအကြောင်း "EDuke32" အမျိုးမျိုးသောအကြောင်း လည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်အမျိုးမျိုးသော GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုများ သင့်ရဲ့အောက်ပါလင့်ခ်ကိုထောက်ပံ့ပါ ဝီကီ:
Linux ပေါ် EDuke32 တည်ဆောက်ခြင်း
မှတ်ချက်ဖြေ - ငါတို့ရဲ့လက်တွေ့ကျမှုအတွက်၊ Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux အရာအပေါ်အခြေခံသည် MX Linux ကို 19 (Debian 10), ငါတို့အောက်ပါတည်ဆောက်ထားသည် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်».
"EDuke32 သည်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသော Duke Nukem 3D ports ဖြစ်သည်။"
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «EDuke32»တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ဂိမ်းအင်ဂျင် အခမဲ့အိမ်နှင့်တစ် ဦး လိုက်လျောညီထွေ ဂန္ပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သေနတ်သမားဂိမ်း PC ကိုခေါ် Duke Nukem 3D; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » EDuke32: GNU / Linux မှာ Duke Nukem 3D ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ပြီးကစားနည်း။
Bravo မင်္ဂလာပါ။ သင့်ရဲ့မှတ်ချက်နှင့်လေ့လာရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပြီးပြီဆိုလျှင်စာသားကိုထည့်သွင်းထားသည်။ «မှတ်ချက်။ ။ အင်္ဂါရပ်များကဏ္inတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာလာသည်။ »
မင်္ဂလာပါ Deadpool မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မည်သည့်စာကြည့်တိုက် (ဖိုင်လ်) ကိုသင်ရည်ညွှန်းသနည်း။ ငါ install လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုလုံးကိုစမ်းကြည့်တာနဲ့ပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်စာကြည့်တိုက်ပါဝင်တဲ့ဂိမ်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဆိုလိုတာလား။
Deepin သည် Windows 11 ၏ခြေလှမ်းများကိုလိုက်လျှောက်ပြီး Android App များကို၎င်း၏ Store မှတဆင့်ထည့်သွင်းနိုင်သည်
၂၀၂၀ ဇွန်လ - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ